मोना कुवेतद्वारा १४ दिन कोमामा बसेका गणेश लाई आर्थिक सहयोग – Myagdi Overseas Nepalese Association
Home/latest news/मोना कुवेतद्वारा १४ दिन कोमामा बसेका गणेश लाई आर्थिक सहयोग
सेप्टेम्बर ८, कुवेत (Kuwait)
हालसालै गठन भएको म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) राष्ट्रिय कार्यकारी समिती कुवेतले आफ्नो तदर्थ समितीको दोर्सो मासिक बैठक फिन्तास पार्कमा सम्पन्न गरेको छ । बैठकबाट कुवेतको कुक्जे कम्पनीमा कार्यरत रघुगंगा गाउँपालिका–३ मतारेका गणेश बहादुर किसान (थापा) लाई म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) राष्ट्रिय कार्यसमिति कुवेतले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
कुवेतको आदान अस्पतालमा झन्डै ५० दिनको उपचार पछि हिजो स्वदेश फर्किएका गणेश लाई म्याग्दी मोनाले नेपाली रु. ४०,००० हजार आर्थिक सहयोग गरेको हो । रक्तचापको समस्याले आफ्नै कोठामा अचेत भएर ढलेपछि उनलाई उपचारको लागि आदान अस्पतालमा भर्ना गरीएको थियो । दुई हप्ता सम्म कोमामा राखेर उपचार गरिएको थियो ।
हस्पिटलमा बिरामी गणेशलाई भेट्दै मोना कुवेतका पदाधिकारीहरु
उनको उपचारमा लागेको सबै खर्च कम्पनीले व्यहोरेको छ । कम्पनीको सहयोगमा कुबेतको आदान अस्पतालमा उपचार गराएका गणेशको रेखदेखको लागि कम्पनीले राखुकै रिजन परियारलाई खटाएको थियो । बिगत २ वर्ष देखि कुक्जे कम्पनीमा कार्यरत रहेका गणेश बिरामी हुँदा घरपरिवारको गुजारा चलाउने सपना पनि भताभुंग भएको छ । उनको दायाँ खुट्टा र हात नचल्नुको साथै अहिले सामान्य बोल्न सक्ने भएपनि अझै पूर्ण रुपमा स्मरण गर्ने शक्ति फर्किसकेको छैन् ।
नेपाल फर्किदै गणेश एयरपोर्टमा
कुवेतको कानुन अनुसार उनले पाउनु पर्ने सबै हिसाब उपलब्ध गराइएको सोही कम्पनीमा प्रशासन शाखामा कार्यरत राखु साझापानीका तिलक भण्डारी (कमल) ले जानकारी गराउनु भएको छ । उहाँकै संयोजकमा कम्पनीमा रकम संकलन गरि नेपाली रु. ४,६०,००० (चार लाख साठी हजार) गणेशको श्रीमती यु माया थापाको बैंक खातामा जम्मा गराएको र अरु थप रकम पनि संकलन भइरहेको भण्डारीले जानकारी गराउनु भएको छ ।
मोना कुवेत तदर्थ समितीको यो सहरानिय कामको लागि मोना आईईसी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ । आगामी दिनमापनी यहाँहरु यसैगरी म्याग्दी र म्याग्देलीको हितको काममा सदा लागिरहनु हुनेछ ।